ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ ဗိုက်ထဲက ရင်သွေးလေးက မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ခပ်ကြွားကြွားလေးပြောလာခဲ့တဲ့ စည်ဖြိုး – Cele Snap
ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ ဗိုက်ထဲက ရင်သွေးလေးက မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ခပ်ကြွားကြွားလေးပြောလာခဲ့တဲ့ စည်ဖြိုး
သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလအတွင်းကပဲ သူအရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူလေး သရုပ်ဆောင်ခင်လွှမ်းနဲ့ ရွှေလက်တွဲ လက်ထပ်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စည်ဖြိုးက အခုဆိုရင် အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သွားသလို ကလေးဖေဖေလောင်းတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နေပြီမို့ အရင်ကထက်ပိုပြီး အလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေသလို မိသားစုအတွက် တာဝန်ကျေတဲ့ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေလျက်ရှိပါတယ်။ စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းကတော့ သူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးရင်သွေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မျှော်တလင့်လင့်ရှိနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ခင်လွှမ်းရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကလည်း ရက်သတ္တပတ်အတော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သလို သားလေးလား သမီးလေးလားဆိုတာကိုလည်း သိရှိရပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စည်ဖြိုးကတော့ သူ့ရဲ့ ချစ်ဇနီး ဗိုက်ထဲက ရင်သွေးလေးက သမီးမိန်းကလေးဖြစ်ကြောင်းကို မိန်းကလေးဝတ်ဂါဝန်ပိစိလေးတွေကိုရှာရင်း “ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေဝယ်ပေးရင်ကောင်းမလည်း စဉ်းစားနေမိ ဟိဟိ.. Hello Santa !!.. The Princess is Coming … .. .” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ပရိသတ်တွေကို ပြောပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စည်ဖြိုးကတော့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်တည်း ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူပီပီ ပထမဦးဆုံးရင်သွေးလေးက သမီးမိန်းကလေးဖြစ်နေတာကြောင့် တော်တော်လေး စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လွှမ်းလည်း သမီးလေးကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ကျန်းမာစွာ မွေးဖွားနိုင်ပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Si Phyo ‘s fb
သရုပျဆောငျ စညျဖွိုးကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ နိုဝငျဘာလအတှငျးကပဲ သူအရမျးခဈြတဲ့ ခဈြသူလေး သရုပျဆောငျခငျလှမျးနဲ့ ရှလေကျတှဲ လကျထပျခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ စညျဖွိုးက အခုဆိုရငျ အိမျထောငျသညျတဈယောကျလညျးဖွဈသှားသလို ကလေးဖဖေလေောငျးတဈယောကျလညျး ဖွဈနပွေီမို့ အရငျကထကျပိုပွီး အလုပျတှကွေိုးစားလုပျကိုငျနသေလို မိသားစုအတှကျ တာဝနျကတြေဲ့ ဖခငျကောငျးတဈယောကျဖွဈအောငျ ကွိုးစားနလေကျြရှိပါတယျ။ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးကတော့ သူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးရငျသှေးလေးကို ပိုငျဆိုငျဖို့ မြှျောတလငျ့လငျ့ရှိနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အခုဆိုရငျ ခငျလှမျးရဲ့ ကိုယျဝနျကလညျး ရကျသတ်တပတျအတျောရှိခဲ့ပွီဖွဈသလို သားလေးလား သမီးလေးလားဆိုတာကိုလညျး သိရှိရပွီးပွီ ဖွဈပါတယျ။ စညျဖွိုးကတော့ သူ့ရဲ့ ခဈြဇနီး ဗိုကျထဲက ရငျသှေးလေးက သမီးမိနျးကလေးဖွဈကွောငျးကို မိနျးကလေးဝတျဂါဝနျပိစိလေးတှကေိုရှာရငျး “ဘယျလိုပုံစံလေးတှဝေယျပေးရငျကောငျးမလညျး စဉျးစားနမေိ ဟိဟိ.. Hello Santa !!.. The Princess is Coming … .. .” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနေ ပရိသတျတှကေို ပွောပွလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
စညျဖွိုးကတော့ ညီအဈကိုနှဈယောကျတညျး ကွီးပွငျးလာခဲ့ရသူပီပီ ပထမဦးဆုံးရငျသှေးလေးက သမီးမိနျးကလေးဖွဈနတောကွောငျ့ တျောတျောလေး စိတျလှုပျရှားပြျောရှငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခငျလှမျးလညျး သမီးလေးကို အောငျအောငျမွငျမွငျနဲ့ ကနျြးမာစှာ မှေးဖှားနိုငျပါစနေျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
အားကိုးနေရတဲ့ တပည့်လေးတွေကို ငွေသားအထုတ်လိုက်ကိုင်ပြီး ခရစ္စမတ်မုန့်ဖိုးအဖြစ် ပိုက်ဆံများစွာပေးနေတဲ့ စမိုင်းလ်
မြင့်မြတ်ရဲ့ဖခင်ဟာ သားကိုအရှက်ခွဲချင်လို့ကြံစည်နေတာ ကြာခဲ့ပြီလို့ အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလာတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့မိခင်…